သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သည်သင်၏စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုဖြစ်သင့်သည်။ | Martech Zone
မိုhouse်းရွာ။ ရေစီးသည်နှင့်လေ လာ၍ ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသော်၊ ကျောက်ပေါ်မှာတည်သောကြောင့်မပြိုမလဲနေ၏။ အကြင်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား။ နားမထောင်ဘဲနေ၏။ ထိုသူသည်သဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့်တူကြောင်းကိုငါပုံပြမည်။ မ7ဲ ၇း၂၄-၂၇
လေးစားရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သူငယ်ချင်းကောင်း Lee Odden ယခုအပတ်တွင် Tweet လုပ်ခဲ့
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုမဟုတ်တော့ချေ။ @dennisyu # CMC18
- လီ Odden (@leeodden) မေလ 4, 2018
ငါသည်လည်းဒဲနစ်ကိုများစွာနှစ်သက်သည်။ သို့သော်စျေးကွက်သမားများသည်သူတို့၏ဆိုဒ်များကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်စွန့်လွှတ်သင့်သည်၊ ဖောက်သည်များအားဆွဲဆောင်ရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်တတိယပါတီ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်သာလုပ်ကိုင်သင့်သည်ဟူသောအယူအဆကိုငါခြွင်းချက်ယူထားရသည်။ ငါသဘောမတူလို့ဒဲနစ်စ်ကကျွန်တော့်ကိုအေးဆေးစွာနေခဲ့တယ်
ဘာလို့ထင်လဲ? လူတွေကိုသင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးရမယ်။ အီးမေးလ်၊ SEO၊ ကြော်ငြာများအားလုံးသည်အခြားသူတစ် ဦး အပေါ်မူတည်သည်။ https://t.co/srlq64QR29
- ဒဲနစ်ယူ (@dennisyu) မေလ 4, 2018
ဇော်။ ငါဒီ tweet အားလုံးအမြင်နှင့်အခြေအနေသို့ဆင်းလာသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ စီးပွားရေး ၀ ယ်သူသို့မဟုတ်စားသုံးသူအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်သူတို့၏စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုမဖြစ်ခဲ့ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ဗဟိုဖြစ်သည် ငါ့စကြ ၀ .ာ။ အမှန်မှာသင်၏ရှုထောင့်ဖောက်သည်များသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမပါဝင်နိုင်သော ၀ က်ဘ်ပေါ်၌ဘဝရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အလုပ်ကိုခက်ခဲစေသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကသူတို့ကိုရှာရန်၊ ၎င်းတို့ကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အရာများကိုရှာဖွေရန်နှင့်၎င်းတို့ထံသို့သင့်ထံပို့ဆောင်သောနည်းဖြင့်ဆက်ဆံရန်လိုအပ်သည်။
Mack Collier သည်မကြာသေးမီကမျှဝေခဲ့သည် -
ငါထင်တာကတော့သုံးစွဲသူများသည် Facebook နှင့် Twitter တို့တွင်သီးသန့်တည်ရှိမှုပြworryနာများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်အော်ဂဲနစ်ရောက်ရှိရန်ရုန်းကန်နေရသောကြောင့်ဘလော့ဂ်များသည်ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုအနည်းငယ်ရှိနေသည်ဟုထင်သည်။ ဆိုဒ်များ #ဘလော့ခ်
- Mack Collier (@MackCollier) မေလ 7, 2018
ငါကလုံးဝသဘောတူညီချက်ရှိတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စားသုံးသူများသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလတ်ဆတ်သော၊ သက်ဆိုင်မှု၊ ဖျော်ဖြေမှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေလျက်ရှိကြသည်။ ဒီပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုဟာသူ့ရဲ့လက်လှမ်းမီမှုနဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဆက်လက်တိုးပွားစေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းငါ blog တစ်ခုတည်းရေးသားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာလို့လဲဆိုတော့စာဖတ်သူတွေဟာငါဟာအသည်းအသန်၊ clickbait ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်မတူဘဲကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများနှင့်သင်ဂုဏ်သတင်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးသင်မျှဝေခြင်းနှင့်တုန့်ပြန်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။
သင်ဗဟိုမှရှာသောရလဒ်များကိုသင်မရရှိပါက သင်၏စကြဝuniverseာ, ငါမကြာသေးမီက Side Hustle Show ကိုနားထောင်ရန်သင့်အားအားပေးပါတယ်။ ဘလော့ဂါများအတွက် SEO - ဂူဂဲလ်မှပိုမိုလွတ်လပ်စွာသွားလာရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနည်းလမ်း။ Matt Giovanisci ကကျွန်ုပ်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွေးကြော်ခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမျှဝေသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကြောင်းအဖြစ်မှတ်သားနေစဉ် လွယ်ကူသော၀ က်ဘ်ပေါ်၌အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးများထုတ်လုပ်ရန်အလုပ်များစွာလိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိတ် ၀ င်စားကြောင်းပြသသည့် ၀ ယ်သူများကိုသင်လွတ်လပ်စွာဆက်သွယ်နိုင်ပါသလား ဘယ်မှာ မင်းသူတို့ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေနေတာလား
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Facebook Ads သို့မဟုတ်သင့်တွင်အီးမေးလ်လိပ်စာမရှိသော၊ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ခ်ျပို့နိုင်သည့်စွမ်းရည်သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်မရှိသည့်အခြားပလက်ဖောင်းများကိုအသုံးပြုနေပါက ... အလားအလာမရှိပါ။ သူတို့သည်သင်၏စကြာ ၀ ofာ၏အပြင်ဘက်တွင်ရှိသည်။ Facebook ပေါ်ကနောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာမင်းရဲ့အလားအလာတော့မဟုတ်ပါဘူး Facebook ရဲ့အလားအလာ။ သူတို့ကိုစကားပြောဖို့ Facebook ကိုအခကြေးငွေပေးရမယ်။ ပြီးတော့၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုစကားပြောနိုင်မလဲ၊ သူတို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုကန့်သတ်ရုံတင်မကဘူး၊ သူတို့နဲ့စကားပြောဖို့စျေးနှုန်းလည်းပါ ၀ င်တယ်။ သူတို့ဟာစွမ်းရည်ကိုလုံးလုံးဖယ်ရှားပစ်နိုင်တယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အိမ်ကိုသဲပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။
ဒါကကျွန်တော် Facebook ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်အပြည့်အဝအသုံးချဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ငါလုပ်တယ် သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ရရန်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်မှာကျွန်ုပ်သည်ထိုစားသုံးသူ (သို့) ရှုထောင့်ဝယ်သူကိုကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့ဆောင်။ သူတို့၏ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ငါသူတို့အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ရတဲ့အခါသူတို့အမှန်တကယ်အလားအလာရှိသောအခါဖြစ်ပါသည်။
သင့်ရဲ့အလားအလာကိုပိုင်ဆိုင်သောဤအရင်းအမြစ်များအပြင်ဘက်တွင်နောက်ထပ်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။ သင်ပိုက်ဆံကုန်သွားတဲ့အခါသင်ကကုန်သွားပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်မယုံနိုင်လောက်သောအကြောင်းအရာများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါကျွန်ုပ်သည် ဦး ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သည်။ တကယ်တော့ငါရေးသားခဲ့သည်ဆောင်းပါး API အလုပ်လုပ်ပုံ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လွန်ပြီးတစ်လလျှင်တစ်သောင်းလည်ပတ်မောင်းနှင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အယူအဆကိုရှင်းပြနိုင်အောင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အခြားတတိယပါတီဗီဒီယိုများကိုလည်းငါပေးသည်။
ဒီနေရာတွင်သင့်အတွက်အိမ်စာအချို့ရှိသည်။ ဥပမာကိရိယာတစ်ခုသုံးပါ Semrush ကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောပြိုင်ဘက် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်မဟုတ်သောသင့်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖော်ထုတ်ပါ။ အဲဒါကိုတိုးတက်အောင်သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ ပိုကောင်းအောင်ရှင်းပြရန်သင်ထည့်နိုင်သည့်ရုပ်ပုံများ၊ ကားချပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုတစ်ခုရှိပါသလား။ သင်၏ရှင်းလင်းချက်သို့မဟုတ်သီအိုရီကိုထောက်ခံသည့် ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းအချက်အလက်များရရှိနိုင်ပါသလား။
အံ့ဖွယ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စိန်ခေါ်ပါ - စာအုပ်ငယ်လေးနီးပါးလောက်။ နောက်ခံ၊ ခေါင်းစီးများပါသောကဏ္ludeများပါ ၀ င်ပြီးပြိုင်ဘက်များထက်သင့်ဆောင်းပါးကိုပိုကောင်းအောင်သရုပ်ဖော်ပါ။ ဆောင်းပါး၏အဆုံးတွင်ပြyouနာကိုသင်နှင့်ထပ်မံဆွေးနွေးရန် (သို့) သင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများအားမြှင့်တင်ရန်စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်သည့်အလွန်ကောင်းသည့်ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုပါ ၀ င်ပါ။ ယခုဆောင်းပါးကိုဒီနေ့၏ရက်စွဲနှင့်ပြန်လည်ထုတ်ဝေပါ။ လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်လစဉ်လတိုင်းထိုဆောင်းပါးကိုမြှင့်တင်ပါ။
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်Facebook ကfacebook ကိုကြော်ငြာတွေသဲပေါ်မှာအိမ်သဲsemrushစကွဝဠာ
မေလ 28, 2018 မှာ 3: 59 pm တွင်
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Facebook Instant Articles နှင့် Google AMP နှစ်ခုစလုံးသည်၎င်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြသသော်လည်း canonical နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်သင်၏စကြာ ၀ ofာ၏ဗဟိုဖြစ်သင့်သည်ဟူသောသင်၏အမြင်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
စျေးကွက်သမားများသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အီးမေးလ်အင်ဂျင်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့်အခြားလိုင်းများသည်ဖြန့်ဖြူးရာနေရာများဖြစ်သောရုပ်သံလိုင်းများစွာတွင်နေထိုင်သော Canonical content repository ရှိသည့်ဖြစ်နိုင်ချေဖြစ်နိုင်ခြေရှိသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဝက်ဘ်ဆိုက်” အားအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ CRM၊ CDN၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စနစ်နှင့်တစ်ခုလုံးပါ ၀ င်သည့်အခြား plug-in များအဖြစ်သို့ခွဲထုတ်နိုင်ပါသလား။
အကယ်၍ သင်သည်ပရိဘောဂစတိုးဆိုင်များနှင့်သင်၏အသွားအလာအများစုကို Maps, Facebook၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ တီဗီကြော်ငြာများမှမောင်းထုတ်လျှင်၊ ဖုန်းခေါ်ရန်နှိပ်ပါ၊ စသည်ဖြင့်သင်၏စတိုးဆိုင်များသို့သွားလျှင်ကော။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရှိနံပါတ် ၁ ပရိဘောဂဆိုင်နှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ROI သည်သူတို့ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပို့ခြင်းထက်သာလွန်သည်။ ”
ကျွန်ုပ်၏ယူဆချက်မှာ“ ဝက်ဘ်ဆိုက်” ၏စိတ်ကူးသည်အလွန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးသောကြောင့်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဒေတာအချက်အလက်သိုလှောင်ရာနေရာများစွာရှိသည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဗဟိုပြုခြင်း၊ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ရှုထောင့်၏ဗဟိုသည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း။
ဇွန် 8, 2018 မှာ 4: 57 pm တွင်
ဒါဟာခိုင်လုံတဲ့မေးခွန်းပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုတလွဲထင်မှတ်မိခြင်းမရှိဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဥပမာမင်းရဲ့နမူနာကိုငါယူမယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ပရိဘောဂဆိုင်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အသွားအလာအများစုကိုမြေပုံများ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ မဂ္ဂဇင်းများ၊ တီဗီကြော်ငြာများ၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်စသည်တို့မှမောင်းနှင်ပါက…ကျွန်ုပ်သည်ဤအရင်းအမြစ်များကိုရှေ့သို့ရွေ့လျားခြင်းအပေါ်မှီခိုနေသည်ကိုသဘောပေါက်ရမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိလယ်ယာမြေကိုကျွန်ုပ်အလောင်းအစားပြုလျှင်၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ထံမှကော်ဇောအသစ်တစ်ခုကိုအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်တီဗွီကြော်ငြာများဖြစ်ပါကဘူတာရုံသည်ရောင်းနိုင်ပြီးစျေးနှုန်းလည်းတက်လာနိုင်သည်။
ကျနော့်အချက်ကတော့နေရာတိုင်းမှာရှာဖွေနိုင်မယ့်အလားအလာတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုမသုံးဘဲတတိယပါတီအပေါ်မှာမှီခိုနေစရာမလိုဘူး။ ငါကူညီမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်